नेपाली एकता समाज भारतको मध्य दक्षिण राज्य सम्मेलन भव्य रुपमा सम्पन्न - सकारात्मक परिवर्तनवाहक विचार, कला/साहित्य र सत्य खवरको बाटाे
प्रकाशित मिति : २०७६ भाद्र ३
काठमाडौं । नेपाली एकता समाज, भारत मध्य दक्षिण भारत एकताको प्रथम राज्य सम्मेलन भव्य रुपमा सम्पन्न भएको छ । हैदरावादको जेडीमेट्लामा देशभक्त जनगणतान्त्रिक मोर्चा, नेपालका केन्द्रीय महासचिव क. परि थापाको प्रमुख आतिथ्यतामा सम्पन्न सम्मेलनको अध्यक्षता लक्ष्मी आचार्य र सञ्चालन विक्रम विसीले गरेका थिए भने सम्मेलनलाई राजेन्द्र धिमालले स्वागत गरेका थिए ।
सम्मेलनको उद्घाटन गर्दै प्रमुख अतिथि थापाले वर्तमान कथित कम्युनिस्ट पार्टीको सरकारले विगतका सरकारहरुले जस्तै राष्ट्रघात, जनघात र भ्रष्टाचार लाई निरन्तरता र व्यापकता दिएको बताए । उनले अगाडि भने, ‘समाजवाद’को लफ्फाजी दिएको सरकारले शिक्षा, स्वास्थ्य र रोजगारीको दायित्व लिनु पर्नेमा ती विषय र क्षेत्रमा भैरहेको नीजिकरणलाई तिब्रता दिएर मुठ्ठीभर दलाल, नाफाखोर र विचौलियाहरुको हितमा काम गरेको छ ।’
त्यसैगरी नेता थापाले भने, ‘वर्तमान सरकारले संविधानमा व्यबस्था भएका प्रावधानहरुका विपरित कार्य गरेको र राज्य व्यबस्था प्रतिकृयादमा पतन भैसकेकाले अब यसको भण्डाफोर गर्न आवश्यक नभएकाले आगामि मंसिर महिनामा हुने भनिएको संघीय र स्थानीय चुनावलाई सकृय बहिष्कार गर्दै संघर्षलाई सशक्त ढंगले अगाडी बढाएर संघीय जनगणतन्त्र स्थापनाको दिशामा अगाडि बढ्नु पर्दछ ।’
नेता थापाले नेपाली एकता समाज, भारतले देश भित्र भएका र हुने विभिन्न आन्दोलन र संघर्षहरुमा सहयोग, समर्थन र सहभागिता पुर्याउंदै आएको स्मरण गर्दै नेपाली एकता समाज, भारतको प्रसंशा गरे । साथै, उनले देशमा रोजगारीको अभावका कारण विदेशिन वाध्य भएका युवाहरुलाई संगठित, एवं अनुशासित हुन र बनाउनमा महत्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गरेकोमा समेत नेपाली एकता समाज, भारतलाई धन्यवाद दिए ।
नेपाली एकता समाज, भारत केन्द्रीय समितिका अध्यक्ष आनन्द थापाले प्रस्तुत गरेको नयां प्रदेश कार्य समितिको नामावली बन्दसत्रले सर्वसम्मतिबाट पारित गरेको थियो । नेता आनन्द थापाले नवनिर्वाचित समितिलाई बधाइ दिएका थिए । सम्मेलनमा शुभकामना मन्तव्य दिनेहरुमा नेपाली एकता समाज, भारतका केन्द्रीय समितिका सदस्य छविलाल थापा लगायत रहेका थिए ।
सम्मेलनले राम कुमार कार्कीको अध्यक्षतामा १९ सदस्सीय नेपाली एकता समाज मध्य दक्षिण भारत प्रदेश कार्य समिति चयन गरेकोछ । प्रदेश समितिको अन्य पदाधिकारीहरुमध्ये उपसभापतिमा बालकृष्ण सापकोटा, सचिवमा टीकाराम भुल, सहसचिवमा विक्रम जी. सी, कोषाध्यक्षमा गोविन्द के. सी., सदस्यहरुमा मोहनलाल सापकोटा, डिलमाया थापा, पदम कार्की, राजेन्द्र धिमाल, राम प्रसाद पौडेल, भुपराज घिमिरे, टंक ठकुरी, सीता कार्की, सपना चापागाई, अमर बी. क. रहनु भएकोछ भने दुई स्थान रिक्त रहेकोछ।त्यसैगरि सल्लाहकारमा लक्ष्मी आचार्य, प्रकाश चापागाईं,धन बहादुर भुल, चन्द्र सापकोटा लगायत रहेका छन् ।